About MGLF – MGLF
SAASL 2020 and Myanmar NASH Meeting
APASL – STC 2020
Webinar Scientific Talk
Link and Notices
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါပညာအဖွဲ့ Myanmar GI and Liver Society (MGLS) ကို (၂၀၀၂) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှစ၍ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အသည်းရောဂါများနှင့် ပတ်သက်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်းနှင့် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်များ စိစစ်ရေးသား ထုတ်ဝေခြင်းစသော အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါပညာရပ် တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို တစ်စိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမြို့ရွာဒေသအသီးသီးမှာ နေထိုင်ကြသည့်အများပြည်သူများ အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးပွားစေရန် ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ နယ်လှည့် (အခမဲ့) ဆေးကုသခြင်း၊ မှန်ပြောင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး/စီပိုး များစစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့် အသည်းရောင် အသားဝါဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါပညာ အဖွဲ့အနေဖြင့် မည်သည့် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အထောက်အပံ့ကိုမှ ရယူခြင်းမရှိဘဲ မိတ်ဖက်ဆေးကုမ္ပဏီများ၏ လှူဒါန်းမှုအပြင် အဖွဲ့ဝင်ဆရာဝန်များ၏ လူအား၊ ငွေအားများဖြင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါပညာရပ်များ ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ သုတေသနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ကုသရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအတွင်း အသိပညာပြန့်ပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဖောင်ဒေးရှင်း”
အထူးသဖြင့် ပြည်သူများ၏ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတများ တိုးပွားစေရေး ပိုမိုထိတွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ရောဂါရှာဖွေရေး၊ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူလူထု၏ ပူပေါင်းပါဝင်မှု မြင့်မားလာစေရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသာမက ပြည်တွင်း အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုများကို လက်ခံပြီး ထိရောက်သောလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချနိုင်ရန်နှင့် အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာ သုသေတနလုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ကူညီ အားပေးနိုင်ရန် “ဖောင်ဒေးရှင်း” တစ်ခု ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန် အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါပညာအဖွဲ့၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါပညာ အဖွဲ့အနေဖြင့် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် လူထုနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ကာ အသိပညာပြန့်ပွားရေး ဆောင်ရွက်မည့် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရပ်တည်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်သည့်အနေဖြင့် “မြန်မာနိုင်ငံ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါ ဖောင်ဒေးရှင်း” ကို လွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်အနေဖြင့် တည်ထောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါ ပညာအဖွဲ့နှင့်လည်း လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်သော “ဖောင်ဒေးရှင်း” အဖြစ် (၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဤ “မြန်မာနိုင်ငံ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါ ဖောင်ဒေးရှင်း” ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းကို (၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲ၍ (၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဖောင်ဒေးရှင်း၊ ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်သည်။
(က) ပြည်သူလူထုများ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတများ တိုးပွားစေရေး။
(ခ) အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါများနှင့် ပတ်သက်သော သုသေတနလုပ်ငန်း များကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးရေး။
(ဂ) ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါပညာ အဖွဲ့နှင့်အတူ အပြန်အလှန် ပူပေါင်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရေး။
(ဃ) တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အပြည့်ဖြင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး။
(င) ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ လွတ်လပ်သော အစိုးရမဟုတ်သည့် စေတနာရှင် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေရေး။
(စ) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒများနှင့် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက် များကို ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ကူညီ အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်ရေး။
(ဆ) ပြည်သူလူထုအတွင်း အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာ ရောဂါများအား ခေတ်ပေါ်ထက်မြက်သော ကုသနည်းများဖြင့် ထိရောက်စွာ ကုသပေးနိုင်ရေး။
(က) အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါများရှာဖွေရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူလူထု၏ပူပေါင်းပါဝင်မှု မြင့်မားလာစေရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
(ခ) ပြည်သူလူထုများအကြား အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါများ အကြောင်း ပိုမို သိရှိ နားလည်သဘောပေါက်လာကာ ပြည်သူများပါဝင်သော ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်း များအား ကျေးလက်ဒေသအထိ ထိရောက်စွာ ကုသပေးနိုင်ရေး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန်။
(ဂ) လူငယ် အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါပညာရှင်များကို မြေထောင် မြှောက်ကာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆုများ ချီးမြင့်ပေးရန်နှင့် လိုအပ်သော အကူအညီများ ပေးရန်။
(ဃ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။
ဖောင်ဒေးရှင်း၏ မျှော်မှန်းချက်များ (ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ)
(က) ပြည်သူအများ သိသင့်သော အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါများ ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို လူထုအကြား ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေရေး။
(ခ) ပြည်သူအများအကြား ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ ပပျောက်ရေးနှင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် ခေတ်နှင့်အညီ ထက်မြက်သော ကုသနည်းများဖြင့် ထိရောက်စွာ ကုသပေးနိုင်ရေး။
(ဂ) သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အစဉ်တစိုက်အားပေးခြင်းဖြင့် လူငယ် အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့်အသည်းရောဂါ ပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် အထောက် အကူဖြစ်စေရေး။
(ဃ) ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းညှိုနှိုင်းကာ ရောဂါရှာဖွေရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်နိုင်သည့် လွတ်လပ်သော အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ရေး။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်
အမှတ် (၄၅)၊ အခန်း (၄၀၅၃)၊ ပြည်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Copyright 2019 MGLF. All rights reserved. Website developed by Wun Wun Lat Co., Ltd